China 55 HRC NC Spotting Drills ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy aluminium | Mingtaishun
55 HRC NC Spotting Drills ho an'ny alimo
Vita amin'ny vy vy tungsten miaraka amin'ny hamafin'ny 55HRC sy maharitra
Miaraka amin'ny firakotra silika titanium ho an'ny fanodinana vy
Fahamarinana avo lenta, mety amin'ny fanodinana milina fitotoana tsara
Fitaovana lehibe sy kalitao avo lenta, fanoloana tsara ny taloha
Hita amina fomba telo hisafidianana
Ny isan'ny sodina dia ampahany tena ilaina amin'ny fifehezana ny fahombiazan'ny milina famaranana. Amin'ny ankapobeny, raha vitsy ny sodina dia mora ny mamoaka poti, fa ny faritra somary somary kely kosa dia lasa kely kokoa ka manjary mihintsana ny hamafisan'ny fitaovana ary mamela ny fitaovana hihetsiketsika amin'ny fanapahana. Etsy ankilany, raha maro ny sodina dia mihabe ny faritra ampiakarina ary mihabe ny henjana, saingy midina ny fahafaha-mitana noho ny fampihenana ny paosin'ny puce ary mora sakanan'ny chips.
Ny hamafin'ny fitaovana amin'ny halavan'ny sodina
Ny halavan'ny fitaovana, ny avo kokoa ny henjana sy ny fahombiazan'ny fanapahana.
Ny halavan'ny sodina dia lasa indroa, ny henjana ny fikosoham-bary farany dia latsaka amin'ny 1/8. Satria ny milina famaranana dia fitaovana hampihetsiketsehana marindrano, zava-dehibe ny hamafisan'ny fitaovana amin'ny refy mifanitsy amin'ny halavan'ny fitaovana. Tsy tsara ny mampiasa sodina lava kokoa.
Azonao atao ny misafidy sodina sahaza ho an'ny fantsom-bokatrao ankehitriny fa TOOLS XUTE JIFENG, manana entana isan-karazany izahay.
Teo aloha: 55 HRC NC fitsikilovana fizahana
Manaraka: 55 HRC Square End mill-2 Flute
Fitsipika momba ny alimina